မိသားစုခရီးသွားခြင်း Seymour, IN | ဂျက်ဆင်ကောင်တီ itor ည့်သည်စင်တာ
ဇြန္လ 25, 2022 812.524.1914
Jackson County ရှိ ယခုလ၏ အဖြစ်အပျက်များအတွက် နှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပွဲတော်များနှင့် ပွဲများကို ကြည့်ရှုရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပွဲတော်များနှင့် ပွဲများ
ပြင်ပအပန်းဖြေနေရာများနှင့် မိသားစုဖော်ရွေသော လှုပ်ရှားမှုများစွာဖြင့် ဧည့်သည်များသည် Jackson County Visitor Center တွင် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် လှုပ်ရှားမှုများစွာကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်လမ်းကြောင်းကိုမဆို လွယ်ကူသောခရီးတစ်ခုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် Indianapolis ၏တောင်ဘက်တစ်နာရီ၊ Louisville ၏မြောက်ဘက်တစ်နာရီ၊ KY၊ Cincinnati၊ OH မှတစ်နာရီ၊ Bloomington နှင့် Nashville၊ Indiana မှ ခုန်ကူးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ Interstate 50 မှ Exit 65 ကိုယူပြီး ကျွန်တော်တို့ကို လာကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျယ်ပြန့်သော မိသားစုလိုက်ပွဲများနှင့် ပွဲတော်များသည် သင့်အတွက် မမေ့နိုင်သော အခိုက်အတန့်များကို ဖန်တီးနိုင်စေပါသည်။ သင်၏နောက်ထပ်စွန့်စားခန်းကို အင်ဒီယားနားပြည်နယ်၊ Jackson County သို့ စီစဉ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည့် အချက်အလက်အားလုံးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား သင့်အား လည်ပတ်ရန် သင့်အား တိုက်တွန်းပါသည်။ ဂျက်ဆင်ကောင်တီအတွက်လမ်းညွှန်အသေးများအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ!
1850 ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ခဲ့သော ဤအသိုက်အဝန်းငယ်လေးသည် ၎င်း၏အမွေအနှစ်အတွက် ဂုဏ်ယူပါသည်။ ပြည်နယ်လမ်း 58 နှင့် 135 တွင်ထိုင်ပြီး ဂျက်ဆင်ကောင်တီနွားထီး7ကောင်အပါအဝင် ရတနာများစွာရှိသည့်နေရာဖြစ်သော Freetown-Pershing ပြတိုက်မှ အေးအေးလူလူ၊ ရေခဲမုန့်ဆိုင် သို့မဟုတ် Sgt. Rick's American Cafe နှင့် BBQ။ လှပသောကျေးလက်ဒေသကို စူးစမ်းလေ့လာပါ။ Salt Creek အဘိဓါန်ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လှပသောရှုခင်းရှုခင်းကိုကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းသူတို့၏ဆုရသည့်ဝိုင်များကိုအရသာခံပါ။
ဤသည်အသိုင်းအဝိုင်းကခရိုင်ရုံးအဆောက်အအုံနှင့်ခရိုင်ရုံးအဆောက်အ ဦး အားလုံးရပ်ရွာနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ခရိုင်တစ်လျှောက်လုံးအားလုံးသမိုင်းဝင်က်ဘ်ဆိုက်များမှ matriarch ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူတစ် ဦး ကြွယ်ဝသောသမိုင်း၏နေအိမ်ကြောင်းကျင်းပခဲ့သည်။ အသိုင်းအဝိုင်းသည်ဆုရရှိသည့်နေရာတွင်နေထိုင်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည် ဂျက်ဆင်ကောင်တီပြပွဲ. Brownstown သည် US50 တွင်တည်ရှိပြီး ကမ်းရိုးတန်းမှ ကမ်းရိုးတန်း အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့် အရှေ့နှင့်အနောက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် အဓိကသွားလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Jackson-Washington ပြည်နယ်သစ်တောနှင့် Hoosier အမျိုးသားသစ်တော၏ရှုခင်းသာတောင်ကုန်းများတွင်ထိုင်နေစဉ် I-10 မှ 65 မိနစ်သာကွာဝေးသည်။
I-65 နှင့် US 31 တို့ကိုအမြန်ခုန်လျှင် Crothersville သည်သူတို့၏မာနကြီးသောကျားများနှင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနေထိုင်သည် အနီရောင်၊ အဖြူနှင့်အပြာရောင်ပွဲတော်. ပွဲတော်သည် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်နှင့် အမေရိကန်အလံကို ဂုဏ်ပြုသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ၎င်း၏ နှစ်တစ်ရာပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့ကို 1976 ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးကျင်းပခဲ့သည်။ Hamacher Hall သည် ဤတိုးတက်နေသော အသိုင်းအဝိုင်း၏ နှလုံးသားတွင် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါဝင်နေသည်။ ဤသမိုင်းဝင်နေရာ၌ လူထုပွဲများနှင့် ရံဖန်ရံခါ ညစာပြဇာတ်ရုံများစွာကို ခံစားနိုင်သည်။ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် စျေးဆိုင်များဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည့်အတွက် ၎င်းသည် Jackson County ၏ ဧည့်ဝတ်ပြုမှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏တောင်ပိုင်းမိတ်ဖက်ဖြစ်သည်။
Seymour ကို I-50, US 65, US 50 နှင့် Indiana 31 ရှိ Exit 11 တွင်အလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်သည်။ Meedy W. Shields နှင့်သူ၏ဇနီး Eliza P. Shields တို့သည်27ပြီ ၂၇, ၁၈၅၂ တွင် Seymour မြို့၏စင်မြင့်ကိုမှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ၁၈၅၄ တွင်အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်နှင့်မစ္စစ္စပီရထားလမ်းကိုထပ်မံတိုးချဲ့ပြီးမကြာမီတွင်ဂျက်ဆင်ကောင်တီတွင်အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်လာသည်။ Seymour သည်စက်မှုလုပ်ငန်း၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ တည်းခိုခန်း၊ ထမင်းစားခန်းနှင့်ပွဲတော်များအပါအဝင်ပွဲတော်များနှင့်ပွဲများကိုပြုလုပ်သည် Oktoberfest Seymourဂျက်ဆင်ကောင်တီ၏ဂျာမန်အမွေအနှစ်ကိုကြည်ညိုလေးစားသော နာမည်ကျော် Rock'n Roll Hall inductee John Mellencamp ကို Seymour တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးခရီးသွားများသည်ရပ်ရွာတစ်လျှောက်ရှိအထင်ကရနေရာများစွာကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်သည်။ Seymour သည်ဒေသတွင်းနာမည်ဆိုးနှင့်ကျော်ကြားသော Reno Gang ၏ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးသောရထားလုယက်မှု၏နေရာဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းရဲ့ဗီဒီယိုကိုဒီမှာနှိပ်ပါ။ ကြီးမားသောမြို့လယ်ကောင်သည်အခွင့်အလမ်းများစွာကိုကမ်းလှမ်းသော်လည်းထိုမြို့ငယ်ခံစားချက်ကိုမဆုံးရှုံးပါ။
Medora သည် Jackson ကောင်တီ၏အနောက်တောင်ဘက်အစွန်းတွင်တည်ရှိပြီးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းများနှင့်ထိုမြို့ငယ်လေးကိုခံစားရစေသည်။ Indiana 235 တွင်တည်ရှိသော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ အရှည်ဆုံး တံတားသုံးစင်းကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ သို့မဟုတ် သမိုင်းဝင် Medora Brick Plant ကို ကြည့်ရှုပါ။ Medora Covered Bridge ၏သူငယ်ချင်းများသည် အသံတိတ်လေလံပွဲနှင့် ဖျော်ဖြေမှုများအပြင် တံတားပေါ်ရှိထူးခြားသောစားသောက်မှုအတွေ့အကြုံဖြစ်သည့် တံတားပေါ်ရှိ နှစ်စဉ်ညစာစားပွဲကို စီစဉ်ကျင်းပပါသည်။ ညစာအကြောင်းဖတ်ရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။ Medora သည် ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်း၏ နိမိတ်ပုံဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ထိုကာလအတွင်း ထင်ရှားသည်။ Medora Goes ပန်းရောင်ပွဲတော် အောက်တိုဘာလသို့မဟုတ် မီဒိုရာခရစ္စမတ်ပွဲတော် ဒီဇင်ဘာလ၌။ မက်ဒိုရာကိုယူအက်စ် ၅၀ သို့မဟုတ်အင်ဒီယားနား ၂၃၅ မှရရှိနိုင်သည်။
Vallonia သည်ဂျက်ဆင်ကောင်တီတွင်ပထမဆုံးအခြေချနေထိုင်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးပြည်နယ်၏ပထမ ဦး ဆုံးပါလီမန်အဆောက်အအုံဖြစ်လာရန်အရှိန်ရနေသည်။ Vallonia သည်ခရိုင်ထိုင်ခုံ၏အပြင်ဘက်တွင်ရှိပြီး Indiana ပြည်နယ် ၁၃၅ မှဆက်သွယ်နိုင်သည်။ Fort Vallonia သည် ၁၈၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းကာလများတွင် Vallonia ၏သမိုင်းကြောင်းကိုသတိပေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာလအတွင်းအသက်ရှင်ခဲ့သည်။ ဝိန်း Fort Vallonia နေ့ရက်များ။ တောင်ကုန်းများနှင့်ဖုများကို Vallonia မှမြင်နိုင်ပြီးလယ်ယာစျေးကွက်အများအပြားနှင့်အရသာကောင်းသော cantaloupe နှင့်ဖရဲသီးတို့ကြောင့်လူသိများသောaroundရိယာတဝိုက်တွင်ထွက်ကုန်များကိုတွေ့နိုင်သည်။
နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံးဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုမှာ Jackson County Fairgrounds တွင်တည်ရှိသော Brownstown Speedway ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်ပြီးတစ်လရှစ်လကြာသည့်ပြိုင်ပွဲများကိုကျင်းပပြီးကျွန်ုပ်တို့မတူညီသောအတန်းများသင်ကြားပေးသည်။ Freeman Field Army Airfield ပြတိုက်နှင့် Fort Vallonia ပြတိုက်အပါအ ၀ င်ပြတိုက်ခြောက်ခုတွင် Jackson County ၏သမိုင်းကိုလည်း can ည့်သည်များလေ့လာနိုင်သည်။ လွတ်မြောက်သွားသောကျွန်များလွတ်မြောက်ရန်ကူညီပေးခဲ့သောမြေအောက်ရထားလမ်းတွင်ဂျက်ဆင်ကောင်တီ၏အခန်းကဏ္ကိုသမိုင်းအစဉ်အလာအရသိရှိနိုင်သည်။ visitors ည့်သည်များပျော်မွေ့ရန်သမိုင်းဝင်လမ်းကြောင်းများ၊ ဖုံးလွှမ်းထားသောတံတားများနှင့်ကျီကျီများလည်းရှိသည်။
အနုပညာချစ်သူများသည်ဂျက်ဆင်ကောင်တီ၏မတူကွဲပြားသောအနုပညာစုဆောင်းမှုများကိုလည်ပတ်ကြမည်ဖြစ်သည်။ တောင်ပိုင်း Indiana ပြည်နယ်အနုပညာစင်တာ၊ Swope Art Collection နှင့်အနုပညာများအတွက် Brownstown ရန်ပုံငွေသည်ထိုဒေသ၏ယဉ်ကျေးမှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။ community ည့်သည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းရှိရုပ်ရှင်ရုံတစ်ခုတွင်ပြပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်နိုင်ပြီးဒေသခံအနုပညာရှင်များနှင့်ပိုမိုတွေ့မြင်နိုင်ရန်လက်မှုပညာလမ်းကြောင်းကိုသွားနိုင်သည်။
ငါတို့၏အပြင်ပန်းဝါသနာရှင်များအတွက်ဂျက်ဆင်ကောင်တီသည်အပန်းဖြေရန်ရွေးချယ်စရာများစွာပေးထားသည်။ Muscatatuck အမျိုးသားတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောသည်အမဲလိုက်ခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်ငှက်ကြည့်ရှုခြင်းအခွင့်အလမ်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းသည်ဂျက်ဆင် - ၀ ါရှင်တန်ပြည်နယ်သစ်တော၊ စတား Hollow ပြည်နယ်အပန်းဖြေနေရာသို့မဟုတ် Hoosier National Forest တွင်ဖြစ်စေသင်အိမ်မှအဝေးမှအိမ်စွန့်စားမှုအတွက်သင့်တော်သောစခန်းချခြင်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်းနှင့်မြင်းစီးခြင်းတို့သည်သိန်းနှင့်ချီသောresကပေါင်းများစွာကျယ်ပြန့်သောကြောင့်ဤမထိရသေးသောဒေသများသို့လည်ပတ်ရန်လူကြိုက်များသည့်နည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ အားကစားများလိုသော visit ည့်သည်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂေါက်သီးကစားရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။